War Soomaali Ma Sidan baa u Danbeysay ?
Intaas kadib Soomaali ma sidan baa u danbeysay, war aaway damiirkii, aaway Soomaalinimadi, aaway dowladnimadi, aaway oday dhaqameedyadii, aaway aqoonyahanadii, aaway Culumadeenii, aaway waxgaradkeenii, aaway haweenkii iyo dhalinyaradiiba.
Soomaaliyeey sidan daw maaha, war aynu isqabano, war aynu miis isugu imaano. War in hal madfac la rido, oo kadib ay boqolaal kale u dhimato xal maaha. Dowladda federaalka ah waxaanu leenahay war si shuruud la’aan ah uga saara itoobiyaanka waddanka, oo dadka isku daya inaad kasbataan, ee itoobiyaan inuu dadka laayo wallee dowlad lagu noqon mayo. Kooxaha kale iyagana waxaanu leeyahay war unaxa dadka oo isku daya inaad dowladda si kale ula xisaabtantaan, ee xal maaha inaad dadka dhexdiisa ku dhuumataan
Soomaaliyeey Qabiil meel aynu ku gaareyno ma jirto, ee aynu isdaba qabano inta goori, goor tahay. War qofka dowladda qabiil ku taageersan wuu khaldan yahay, oo waaqica wuu ka fogyahay. Sidoo kale kan qabiil ku diidan Dowladdana wuu khaldan yahay, oo waaqica wuu ka fog yahay. Isku day inaad si cadaalad ku jirto aad u eegto arimaha murugsan uu waddanka ku jiro. Iska ilow aragtida khaldan ee qabaliyadda.
Mar kale waxaan leeyahay oo ku baaqayaa si shuruud la’aan ah haloo joojiyo xabadda, oo dowladda iyo mucaaradkuba miis ha isugu yimaadaan oo halasoo nooleeyo heshiiski Khartuum ama mid lagu dhigo gudaha waddanka.
Dowladda waxaan ugu baaqayaa inay raadiso nabadda, oo ay geed dheer iyo mid gaaban ba u korto sidi waddanka nabad loogu soo dabaali lahaa. Qolyaha maxkamadaha waxaa leeyahay war nabad iyo heshiis wax dhaama ma leh ee ogolaada inaad nabad wax ku raadisaan. Halka aad xabadaha ka rideysaan, kubadala Mudaharaadyo nabad xambaarsan, oo looga soo horjeedo ciidamada shisheeye.
Soomaaliyeey meel walboo aad joogtaan waxaan idiin leeyahay hala raadiyo nabad oo haleysku dayo in la badbaadiyo maatadeen hadda iyo kow soo qaxeysa.
Soomaliyeey maanta, waa maalintii uu caqliga shaqeyn lahaa, ee aynu badbadino dadkeenii, aynu badbaadino Caasimadeenii Muqudisho, aynu badbaadino dowladeenii, aynu badbadino aqoonyahanadeenii iyo dhammaan meel walboo ay joogaanba Culumadeenii. Sida lagu badbaadin karan waa xabadda oo la joojiyo, oo wax walba wadahadl lagu dhameeyo. Soomaaliyeey dagaal wiil baa ku dhinta, ee wiil kuma dhasho.
Waxaan maqaalkeyga kusoo gabagabeynayaa Soomaaliyeey aynu raadino midnimadii, oo aynu isku dayno inaanu wax walba heshiis ku dhameyno. Sidoo kale waxaan mar kale ku baaqayaa in ay Dowladda Itoobiya ilaaliso daris wanaaga oo ay waddankeeni shuruud la’aaan uga baxdo. Sidoo kale Dowladda federaalka ah ha ilaaliso rabitaanka shicibka.
Soomaaliyeey haddeynu rabno inay dowladnimadeeni soo noqota aynu qabaliyadda iska ilowno, oo raadino qaranimo.
Somali Advice & Information Centre
( 15 Thurlby Road Leicester LE5 3PE – Tel/Fax 0116 2516977 )
Dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed eek u nool magaaladan Leicester waxaan u sheegeynaa in xafiiska Somali Advice & Information Centre, uu howlihiisa aheyd u adeegidda Bulshada, uu dib u bilaabay.
Waxaa kaloo xafiiska lagu soo kordhiyay adeegyo kale oo cusub sida:- Tarjumidda Xafiisyada, Qoritaanka CV- yada, Diyaarinta Interview-yada, Raadinta Shaqada & Tababarada
Haddaba\_Ballanteenu waa xarunta cusub ee xafiiska
15 Thurlby Road – Leicester
U Dhaw - Dukaanka Soomaalida ee GreenLane.
Saacadaha shaqada Maalin kasta
13:30 -16:30 / Isniin - Jimce
NB:- Haddii aad u baahan tahay in laguu raaco xafiisyada, oo lagaaga soo tarjumo soo wac xafiiska labo maalmood ka hor ballantaada. Tel:- 079 0349 3209.
Qualified Advice Worker